allsanaag.com - Adaa Dalkaagii Soo Burbiriyee Bixi Lacagta
Laascaanood waxay xukunka Isaqland ama Soomaaliyadiid ku dhacday 15-10-2007. Waxay dulmi ku jirtay:	3207	Days	18	Hours	04	Minutes	13	Seconds	Horjoogaha Soomalidu Ma Danaystaa? Ma Daryeelaa?
Adaa Dalkaagii Soo Burbiriyee Bixi Lacagta
Written by Shanle	Allsanaag: Xaafada Islii ee magaalada Nairobi ayaa dadkii waxey uga qaxayaan sidii looga soo qaxay Soomaaliya oo kale. Dhibaatada ugu weyn ee hadeer taagan ayaa waxey tahay in qofkii la qabtaa ee Soomaali ah la geeynayo isteeshinka booliska dabadeedna loo sheegayo in lagu shaabadeenayo in uu yahay nimanka Shayaadiinta Shabaabka ee ka dagaalama dalka Soomaaliya sidaa darteedna ay tahay in qofkaas uu is furto. Lacagtan isku furashada ah ayaa waxaa ay u dhaxeesaa laga bilaabo 150,000 ilaa 250,000 oo lacagta wadankaas ee Kenyan Shilinka ah, oo u dhiganta $1700 illaa $3000 oo dollar, taas oo ay ku adagtahay in dadka badankiisa ay iska bixiyaan lacagtaas.
Ciidamada Kenya ayaa dadka Soomaalida waxa ay u yihiin lacag wadada iska mareesa, oo ninkii askariga ahaa marka uu damco in lacag uu sameeyo waxa uu soo qabsanayaa 10 qof oo Soomaaliya oo aan sharci heesan, kuwaas oo uu ka qaadayo mid walba waxa uu ka helo. Tan hada socota, ayaa ka sii daraja sareesa midii awal jirtay; tii awal jirtay oo aheed mid lacagta qofka uu booliiska iskaga furayay ayaa waxey mararka qaarkood ka yareed boqol Kenyan Shilin ah. Hase ahaatee, mida hadeer taagan waa mid ka qatar badan tii horay u jirtay oo waxaa la marsiinayaa boqolaal kun oo Kenyan Shilin ah.
Dhinaca kale, guryahay xaafada Islii ayaa faaruq ah badankooda, meeshii awal kirada ay qaali aheed, helitaanka gurigana uuba adkaa. Tani ayaa sabab u ah faaruqa guryaha kadib markii dadkii ay ka carareen welina ay ka cararayaan, markii lagu shaabadeeyay in ay yihiin Shabaabka Shayaadiinta. Qofkii Soomaaliga ahaana waxa uu door bidayaa in wadankaba uu isaga tago meeshii uu bixin lahaa lacagtaas faraha badan ee ah ADAA WADANKAAGII SOO BURBUIYEE BIXI LACAGTA.
Soomaalida ayaa waxey ku bah dilan yihiin meela bada oo kamid ah Qaarada Afrika. Dilka iyo dhaca ayaa waxa ay yihiin kuwo maalin walba dhaca, iyadoo dadkana ayba yihiin looma ooyaan soo burburiyay wadankooda. Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa aaminsan in Soomaalida la laayo oo xoolohoodana la dhaco, sababtoo ah ayay dadkaasi leeyihiin Soomaaligu dalkiisu ku noqon maayo inta wadan kala uu nabad iyo ganacsi ku heesto, laakiin hadii la laayo oo la dhoco waxey u badan tahay in wadankiisa uu ka yimid uu ku noqdo.